धारामा ड्रम छोयो भन्दै दलित महिला माथि हसिया प्रहार! टाउकोमा लाग्यो आठ ओटा टाँका! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > धारामा ड्रम छोयो भन्दै दलित महिला माथि हसिया प्रहार! टाउकोमा लाग्यो आठ ओटा टाँका! (भिडियो सहित)
सरु सुनार , काठमाडौ – जातिय बिभेदका घटना र यसैबाट सिर्जित अपराध र अपराधी घटनुको सट्टा झनै मौलाउदै गएको देखिन्छ । २०६३ जेष्ठ २१ छुवाछूत मुक्त रास्ट्र घोषण र २०६८ को जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऎन २०६८ अहिले संशोधन भएर २०७५ भैसकेको छ । २०७२ को संबिधानले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध र कानुनी रूपमा दण्डनिय भनेको छ तर ऎन बनेको ८ बर्ष बितिसक्यो । छुवाछूत मुक्त रास्ट्र घोषणा गरेको देशमा यस्तो कहिलेसम्म?
यो मुद्दा छोडदिन मैले र हामी कसैले पनि छोडनु हुन्न आउनुहोस् सबै जना …/ म दैलेखमा पीडित पक्षसग कुरा गरिरहेकी छु , डिएसपीसँग नि कुरा भएको छ सबै आधिकारिक प्रमाण पछि फेरि आउने छु ।
सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने सरकारको यस्तो छ निर्णय
सिमानामा हेर्नुस् यस्तो छ लापरवाही, काेराेना त्यसै फैलिएकाे होइन नेपालमा (भिडियो सहित)